Palestina: Fihetsiketsehana Hanoherana ny Fibodoana, Sy Ho An’ny Firaisam-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2011 17:55 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, Español, Français, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, English
Nitatitra ny Foreign Policy fa voaporofo ny maha-fanamby lehibe an'ireny hetsika ireny ho an'ny Hery Fiarovana Israely (IDF), izay nanandrana hatrany ny handrava ireo hetsika sy hisambotra ny mpanao fihetsiketsehana. Tsy nivoana tamin'izany ihany koa ny herinandro taorian'ny nanasoniavan'i Hamas sy Fatah fifanekena amin'ny fiombonany.
Joseph Dana dia mafana fo teraka tany New York ary manana razambe Jiosy izay nifindra tany Israely mba hitady ny fototra Jiosy niaviany, ary ankehitriny dia mafana fo mitatitra tsy tapaka sady mandray anjara amin'ireo hetsi-panoherana any amin'ireo any Cisjordanie. Nitatitra i Dana tamin'ny takarivan'ny 5 May 2011:
Ireo fihetsiketsehana, anefa, tsy nanomboka mihitsy, nialohavan'ny firotsahan'ny IDF teny an-toerana:
Ny kaonty March 15th Palestine ihany koa dia nitatitra:
Namoaka sary momba ireo rahon'entona mandatsa-dranomaso i Joseph Dana :
Nitatitra i Dana fa nokendrena tamin'izany ihany koa ny vadin'ilay mafana fo voatana an-tranomaizina Bassem Tamimi:
Ora maro taty aoriana, nanambara i Dana fa nisintaka ireo miaramila:
Mandritra izay fotoana izay, nisy ihany koa ireo hetsi-panoherana natao tany amin'ireo tanàna Palestiniana tany Bi'lin, Ni'lin ary Masara. Ny kaonty ofisialin'ny IDF dia nitatitra:
Hafa kosa ny voalazan'ny PSCC (Palestinian Popular Struggle Coordination Committee):
Ary nisy ihany koa ireo hetsika tany Ni'lin:
Tany Masara, nifarana tamin'ny fisamborana ny ben'ny tanàna ireo hetsi-panoherana. Nitoraka tweet i B Sez:
Nifamory tany amin'ny Kianjan'i Manara ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana mba hankalazàa ny fifanekena amin'ny fiombonana tamin'ity herinandro ity manoloana ireo antoko mpifanolana Hamas sy Fatah. Ny taona taorian'ny nandresen'i Hamas tamin'ny fifidianana tany Gaza ny 2006, noroahany hiala an'i GAza ny Fatah, ary tsy dia nifandray firy intsony ireo antoko roa ireo hatramin'izay. Nanomboka ny 15 Martsa, ireo mpanohitra na izany tany Gaza, nofehezin'i Hamas, na ireo tany Cisjordanie, nofehezin'i Fatah, dia samy nanomboka nanao hetsi-panoherana mba hangatahana ny maha-tokana ny firenena. Tamin'ny voalohan'ity herinandro ity, nankalaza ny fifanekem-pihavanana i Gaza. Ny 6 Mey, ny fihetsiketsehina tany Ramallah dia fitohizan'ireo fankalazan'ny Palestiniana ny fahalavorarian'ny hetsiky ny 15 Martsa sy ny maha-tokana ny Palestiniana.
Jalal, izay mamaritra ny tenany ho Palestiniana miaina eo anelanelan'i Jerosalema sy Ramullah, nahita ny fiandohan'ireo fihetsiketsehana, izay nanomboka teo amin'ireo mpomba ny Hamas, ary taoriana kely dia narahan'ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny hetsiky ny Fatah sy ny 15 Martsa. Nitoraka tweet izy:
Nanohy mivantana avy any amin'ny Kianjan'i Manara i Jalal:
Namoaka sary marobe momba ireo mpanao fihetsiketsehan'ny 15 Martsa i Jalal
Tany Manara ireo mpanao fihetsiketsehina tsy hankalaza fotsiny ihany, fa nitaky fifidianana mangarahara ihany koa. Nitoraka tweet i Ashira Ramadan: